Israel machibidoro ụmụ amaala amachibidoro iwu na ebe ọhaneze gụnyere ụlọ nzukọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Israel Na -agbasa Akụkọ » Israel machibidoro ụmụ amaala amachibidoro iwu na ebe ọhaneze gụnyere ụlọ nzukọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Prime Minista Israel Naftali Bennett
Ndị jụrụ ịgba ọgwụ mgbochi “na -emebi mbọ anyị niile,” Prime Minista Israel Bennett kwupụtara.
Ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa coronavirus ọhụrụ na Israel na -arị elu.
Agaghị anabata ndị Israel a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa na ebe ọ bụla nwere ihe karịrị mmadụ 100, ma n'ime ma n'èzí.
Sayensị doro anya: ọgwụ mgbochi ọrịa na -arụ ọrụ, ha na -arụ ọrụ nke ọma.
Prime Minista ọhụrụ Naftali Bennett nke Israel a họpụtara ọhụrụ ekwuputala taa na ndị niile na -agba ọgwụ mgbochi ọrịa Israel n'oge na -adịghị anya, a ga -amachibido ebe ọhaneze ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí nwere mmadụ 100 ma ọ bụ karịa. Mmachibido iwu a ga -agụnyekwa ụlọ nzukọ.
Ndị jụrụ ọgwụ mgbochi COVID-19 “na-emebi mbọ anyị niile,” Bennett kwuru taa, ka ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa coronavirus ọhụrụ na mba ahụ na-arị elu.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla na -enweta ọgwụ mgbochi, ndụ nwere ike ịlaghachi na nkịtị, mana ọ bụrụ na nde mmadụ jụrụ nde asatọ ndị ọzọ ga -atachi obi mkpọchi, Prime Minista kwukwara.
Bennett gwara mba ahụ, "Enwere oge mgbe mkparịta ụka a ga -akwụsị." "Sayensị doro anya: ọgwụ mgbochi ọrịa na -arụ ọrụ, ha na -arụ ọrụ, ọ nweghị nsogbu."
Malite na Ọgọstụ 8, Bennett kwupụtara, a gaghị anabata onye ọ bụla jụrụ ịgba ọgwụ mgbochi ebe ọ bụla “karịa mmadụ 100, ma n'ime ma n'èzí” - gụnyere ụlọ ihe nkiri, ihe egwuregwu na ụlọ ofufe. Iji banye, ndị mmadụ ga-egosi ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi, ihe akaebe na ha nwere COVID-19 wee gbakee, ma ọ bụ nnwale na-adịghị mma, enwetara site na ego ha.
Israel na-eji ọgwụ mgbochi coronavirus Pfizer-BioNTech mRNA. Dabere na Ministri Ahụike, ịdị irè ọgwụ mgbochi ọrịa a na -egosi ọrịa dị 64% yana megide nnukwu ọrịa na 93%.
Oriakụ Jane Godfrey ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 16, 2021 na 02:22
Nke a bụ ihe na -ezighi ezi ma na -ezighi ezi ka sayensị si aga, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ma na -emebi ala nna anyị. Ọ bụrụ na onye isi ala Israel ọhụrụ a na -amụ sayensị n'ezie na ọgwụ mgbochi covid ndị a, ọ ga -achọpụta n'ezie na ihe kpatara ikpe covid ji bilite n'ime Israel n'onwe ya bụ n'ihi ọgwụ mgbochi ndị a n'onwe ha ọ bụghị n'ihi ndị jụrụ ịgbanye. onwe ha na ọgwụ nnwale nke dara ada bụ ụzọ nchekwa ya, ebe anụmanụ niile ejiri n'ime ụzọ mgbochi ọgwụ ndị a nwụrụ, ha niile.